एक दिनको फरकमा मृ*त्यु भएका ऋ`षि कपुर र इरफान खानको नि`धले अमिताभ ब`च्चन दुखी !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/एक दिनको फरकमा मृ*त्यु भएका ऋ`षि कपुर र इरफान खानको नि`धले अमिताभ ब`च्चन दुखी !!!
एक दिनको फरकमा मृ*त्यु भएका ऋ`षि कपुर र इरफान खानको नि`धले अमिताभ ब`च्चन दुखी !!!
काठमाडौं- बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरको बिहीबार निध`न भएको छ । उनको बिहिबार एच.एन. रिलायन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा नि`धन भएको हो । उनको निध`नको खबले बलिउड शोखमा डुबेको छ । ६७ बर्ष लागेका ऋषि कपुर बलिउडका एक सफल अभिनेता हुन् ।
बुधबार अभिनेता इरफान खानको नि`धन भएको थियो । भने आज फेरि बलिउडकै चर्चित अभिनेता ऋषि कपुरको निध`न भएको छ । एक दिनको फरकमा बलिउडले करोडौको मन मुटुमा बस्न सफल भएका अभिनेता गुमाएको छ ।उनको नि`धनको खबरले बलिउड अभिनेता अमिताभ दुखी भएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जा`लमा एक स्टाट`स लेख्दै नि`धनको खबरल केहि बोल्नै सकिन ऋषि कपुरको पनि निध`न भयो। म टु`क्रिएँ। छु एक दिन नबित्दै बलिउडका दुई कलाकार गुमाए ।
बुधबार अभिनेता इरफान खानको नि`धन भएको थियो । भने आज फेरि बलिउडकै चर्चित अभिनेता ऋषि कपुरको निध`न भएको छ ।एक दिनको फरकमा बलिउडले करोडौको मन मुटुमा बस्न सफल भएका अभिनेता गुमाएको छ ।उनको नि`धनको खबरले बलिउड अभिनेता अमिताभ दुखी भएका छन् ।